122s &#39;Zvinorehwa Nenzira yakaipa kuna Robert Forster&#39; BTS | El Camino images and subtitles
-Iye, ngati ... -Zvese, tiri kutenderera pa EPK. -Rolling! Forster: Vanokudaidza uye ivo ndokuti, Vince Gilligan anoda kuva newe mune imwe purojekiti. Uye munhu wese anoti, "Akanaka." Icho chigadzirwa chakanaka. Nekudaro, kana iwe uchidanana newe Kirby, Ini ndichabheja ndinogona kuzviita kuti zvikushandirezve. Vanhu vanouya kwandiri kazhinji uti, "Kuvhuna Zvakaipa." Uye ini ndaingove pane chimwe chiitiko. Icho chave chiri chinhu chikuru pane rangu basa. Ndave nezvimwe zvakanaka zvimwewo, asi "Kuputsa Zvakaipa" ndechimwe chezvinhu zvikuru. Hoover zvigadzirwa, ivo ipapo chaipo pamadziro kumashure kwako. Tarisa, ini handirangarira iyo chaiyo, senge, password, zvakanaka, asi chaive chinhu chisina kujairika. Iyo iprojekti inonakidza kwazvo yatiri kuita. Aaron ndiye nyeredzi huru mukugadzirwa uku, uye ndinofara kuti ari kutora nyaya yake. Ndinoyeuchidza vatambi vanofunga kuti ndeye zvemashoko chete, hazvisizvo, ndezve maitiro uye nguva. Izvi ... yaimbove nechikwereti. Unoshuvira patepi inotevera yaunobatanidza zvese zvakanaka zvawakaita kare nechinhu chero chitsva chingabvunzwa kwauri. Uye rombo rakanaka, iwe munguva pfupi iwe uchazviwana iwe ... Iwe haunzwisise. ... mamaira mazhinji kubva pano. Mwari akaiswa kwauri. Zvamunoedza kuita kuendesa zvinyowani sezvawakaona zvakanyorwa, uye zvakare kununura chimwe chinhu chinogona kunge chakakodzera kuisa iyo pfuti mumufananidzo. Jese: <i>Chibvumirano chiiko?</i> <i>Izwi rako chisungo chako?</i> [Inhales] Ndizvozvo. Ranga riri zuva rakanaka. ♪♪
&#39;Zvinorehwa Nenzira yakaipa kuna Robert Forster&#39; BTS | El Camino
< start="0.466" dur="1.635"> -Iye, ngati ... -Zvese, tiri kutenderera >
< start="4.137" dur="2.302"> Forster: Vanokudaidza uye ivo ndokuti, >
< start="6.439" dur="4.037"> Vince Gilligan anoda kuva newe mune imwe purojekiti. >
< start="10.476" dur="3.537"> Uye munhu wese anoti, "Akanaka." >
< start="14.013" dur="1.635"> Icho chigadzirwa chakanaka. >
< start="15.648" dur="2.703"> Nekudaro, kana iwe uchidanana newe Kirby, >
< start="18.351" dur="2.835"> Ini ndichabheja ndinogona kuzviita kuti zvikushandirezve. >
< start="21.186" dur="2.003"> Vanhu vanouya kwandiri kazhinji >
< start="23.189" dur="2.703"> uti, "Kuvhuna Zvakaipa." >
< start="25.892" dur="1.969"> Uye ini ndaingove pane chimwe chiitiko. >
< start="27.861" dur="3.836"> Icho chave chiri chinhu chikuru pane rangu basa. >
< start="31.697" dur="1.736"> Ndave nezvimwe zvakanaka zvimwewo, >
< start="33.433" dur="2.769"> asi "Kuputsa Zvakaipa" ndechimwe chezvinhu zvikuru. >
< start="36.202" dur="1.936"> Hoover zvigadzirwa, ivo ipapo chaipo >
< start="38.138" dur="1.901"> pamadziro kumashure kwako. >
< start="38.138" dur="1.901"> Tarisa, ini handirangarira >
< start="40.039" dur="2.135"> iyo chaiyo, senge, password, zvakanaka, >
< start="42.174" dur="1.502"> asi chaive chinhu chisina kujairika. >
< start="43.676" dur="3.204"> Iyo iprojekti inonakidza kwazvo yatiri kuita. >
< start="46.88" dur="3.269"> Aaron ndiye nyeredzi huru mukugadzirwa uku, >
< start="50.149" dur="3.771"> uye ndinofara kuti ari kutora nyaya yake. >
< start="53.92" dur="2.702"> Ndinoyeuchidza vatambi vanofunga kuti ndeye zvemashoko chete, >
< start="56.622" dur="3.537"> hazvisizvo, ndezve maitiro uye nguva. >
< start="60.159" dur="3.237"> Izvi ... >
< start="63.396" dur="2.169"> yaimbove nechikwereti. >
< start="65.565" dur="2.97"> Unoshuvira patepi inotevera yaunobatanidza >
< start="68.535" dur="2.201"> zvese zvakanaka zvawakaita kare >
< start="70.736" dur="2.936"> nechinhu chero chitsva chingabvunzwa kwauri. >
< start="73.672" dur="3.605"> Uye rombo rakanaka, iwe munguva pfupi iwe uchazviwana iwe ... >
< start="77.277" dur="2.335"> Iwe haunzwisise. >
< start="77.277" dur="2.335"> ... mamaira mazhinji kubva pano. >
< start="80.879" dur="1.67"> Mwari akaiswa kwauri. >
< start="82.549" dur="2.602"> Zvamunoedza kuita kuendesa zvinyowani >
< start="85.151" dur="2.135"> sezvawakaona zvakanyorwa, uye zvakare kununura >
< start="87.286" dur="1.868"> chimwe chinhu chinogona kunge chakakodzera >
< start="89.154" dur="1.802"> kuisa iyo pfuti mumufananidzo. >
< start="90.956" dur="1.369"> Jese: Chibvumirano chiiko? >
< start="92.325" dur="3.47">Izwi rako chisungo chako? >
< start="95.795" dur="2.635"> [Inhales] Ndizvozvo. >
< start="98.43" dur="1.602"> Ranga riri zuva rakanaka. >